U-Anfisa Chekhova ufihla ukuqala kabusha kobudlelwano nomyeni wakhe wangaphambili, isithombe
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, u-Anfisa Chekhova wayesezibonela ezokuxhumana. Umshado wakhe nomlingisi uGuram Bablishvili wahlukana. Ngaphambi kwalokhu, lo mbhangqwana isikhathi eside wafihla izinkinga emndenini, kodwa abasebenzisi abaqaphelayo inethiwekhi ye-Instagram ngokushesha bazwakala i-alamu lapho umphathi we-TV ehamba eholidini ngaphandle komyeni wakhe.
Ngokushesha u-Anfisa Chekhova wavakashela isimiso sikaLera Kudryavtseva "Imfihlo Yesigidi", lapho eqinisekisa ukuthi uhlukanisile nomyeni wakhe. Ngaphezu kwalokho, uGuram Bablishvili ngokwakhe wafika ohlelweni. Le ndoda yamangala ngesitatimende sokuthi wayekhohlisa u-Anfisa ngesikhathi sishadile.
U-Anfisa Chekhova no-Guram baphumula iBablishvili ndawonye eSochi
Izolo umkhosi uguqulwe usuku lwakhe lokuzalwa lwama-40. Owesifazane uhlele ukuchitha lolu suku nabangani baseVenice, kodwa kwavela ukuthi i-visa yakhe yayiphuzile. Akusekho lutho, ukuthi ubuyele kanjani eSochi, lapho ngaphambili uChekhov ehamba khona nendodana yakhe encane.
Kanye noSolomon, inkanyezi ye-TV ifunda amathrekhi we-ski futhi isithombe ngokulandelana ngemuva kwezintaba zezintaba ezikhishwe ngeqhwa.
Ku-Instagram ka-Anfisa kwakunesithombe kakade kusukela ekugubheni usuku lokuzalwa. Esithombeni, u-Chekhov ubhalwe enkampanini yenkampanikazi, eyagcizelela kulezi ziphakamiso:
Futhi kusihlwa kudlule enkampanini yentombazane efudumele
Kodwa-ke, kwenzeka ukuthi ku-Instagram Anfisa Chekhov ubeka izithombe zakhe ... umyeni wangaphambili uyenzile! Kuvela ukuthi i-Guram Bablishvili nayo i-Sochi. Endabeni yomdlali kwakukhona amavidiyo amaningana enza endaweni efanayo lapho isithombe sithathwe ku-Instagram Chekhovoy. Kufaka endaweni yokudlela. https://youtu.be/36JGuQNsewU Oshadile nabangaphandle bazama ukuhambisana nemfihlo, kepha bazibonele izithombe ezincane ezincane: namuhla uGuram uthumele isithombe noSolomon, engenziwanga endaweni efanayo nesithombe sika-Anfisa.
Ungasho ukuthi u-Anfisa Chekhova noGuram Bablishvili bakhulumisana ngenxa yengane evamile. Futhi lokhu, kuyiqiniso, kuyiqiniso. Kodwa-ke, kulokhu, umbuzo uvela - kungani u-Anfisa Chekhov efihla ngokucophelela ukuthi eduze kwakhe eSochi kungowendoda yangaphambili? Siyabona ku-Zen le ngxenye 👍 futhi owokuqala ukufunda zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
U-Alika Smekhova ubonise isithombe sezingane zakhe
Indodakazi kaRosa Syabitova iphupho lomyeni omusha
UVictoria Bonya ubonise isithombe esisha nomuntu ohlakaniphile
UJulia Snigir okhulelwe uvele e-studio ka-Ivan Urgant
Ukuvulwa kweTrump: yini uMilanya Trump agqoka, isithombe
UBach inkanyezi u-Alla Berger eshada
UTro Cruise angashiya iScientology
Xoxa kusuka ku-mango no-ananas
Umshado ngendlela yaseYurophu
UJulia Kostyushkina ushintshe engaziwa ngemuva kokuzalwa kwendodana yakhe yokuqala, ngaphambi nangemva kwezithombe
Indlela yokunquma ekufakeni izithako zokudla ice cream?
Amadombolo nama cherry
Ukudlala ngothando nomuntu
Ukunakekelwa komzimba, ukupheka kwabantu
I-yoga yezingane kusukela ekuzalweni kuya emavikini angu-8: ukuqala kuphi
Ukuhlukaniswa ngesikhathi sokuzalwa kwengane: Izindlela ezingu-8 ezivela kumlumbi ozuzayo
Yini ongayethula ngoFebhuwari 23, amadoda?
Konke mayelana ne-brazil walnut
Ukuhlukaniswa ngokudlala amakhadi esikhathini esizayo